I-10 yeeBhanki eziBalaseleyo zeMbewu ezikwi-Intanethi ezithunyelwa e-USA 2021 (ngokukhawuleza) - Impilo
Eyona Impilo Iibhanki ezi-10 eziBalaseleyo zeMbewu eziThunyelwa eMelika (uhlaziyo lwango-2021)
Iibhanki ezi-10 eziBalaseleyo zeMbewu eziThunyelwa eMelika (uhlaziyo lwango-2021)
Zininzi iibhanki zembewu ye-cannabis namhlanje, kodwa ukuba uhlala e-United States kuya kufuneka ufumane inkampani esemthethweni oza kuyizisa kuwe. Kungenxa yokuba izikhokelo zomthetho zomdibaniso ziyalela ukuthengwa kwembewu ye-cannabis yokukhulisa izityalo zakho, kwaye imbewu ye-cannabis nayo ayinakuthunyelwa kwimida yelizwe.
Ukuba ujonga ibhanki yembewu esemgangathweni kwi-intanethi, unethamsanqa. Zininzi iibhanki zamadlozi ezithembekileyo phaya eziza kuthumela imbewu kuwe ngephakeji enobulumko kwaye iya kubonelela ngokugubungela okungaphezulu kwaye ithathe indawo yayo ukuba imbewu yakho imisiwe kumasiko. Kolu luhlu, sizibandakanyile zombini eyona bhanki yembewu ihlonitshwayo eMelika nakwamanye amazwe .
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuthenga imbewu ye-cannabis kwi-Intanethi e-US kunye neebhanki zembewu ezisemgangathweni ophezulu ukuzifumana.
Ibhanki yeMbewu ye-ILGM
Isiqinisekiso sokuhluma kuzo zonke iintlobo ezili-100 + ezikhoyo
Ukuhanjiswa simahla nangokukhawuleza
Imbewu ikumgangatho ophezulu kakhulu kwaye iqinisekisiwe ukuba iyantshula
Imithwalo yezixhobo zasimahla ezifumaneka ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi
Ukuhanjiswa okukhoyo kuyafumaneka
Iibhanki ezili-10 zeMbewu zeKhannabis eziLungele ukuThunyelwa eMelika
Ndiyathanda ukukhula iMarijuana (ILGM) -Ukhetho loMhleli
Crop King Imbewu
Ibhanki yeMbewu yeMSNL
Imbewu yeQuannec Cannabis
Imbewu ye-Marijuana yaseAmsterdam
Qaphela: Sebenzisa i-coupon ye-Healthcanal nge-15-30% icinyiwe
Jonga iwebhusayithi EzeMpilo.com kwiintengiso ezongezelelweyo kunye namakhuphoni.
Ndiyathanda ukukhula iMarijuana (ILGM)
Ukhetho olunqunyelwe lweentlobo
Inkonzo yomthengi ephantsi
Ukuhanjiswa okulandelelweyo akukho simahla; Kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu kwe- $ 25.
Ukuthengisa imbewu engafakwanga igama
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto intle ndiyayithanda intsangu ekhulayo (ILGM)
ILoveGrowingMarijuana (okanye i-ILGM ngokufutshane) yenye yeebhanki zembewu ezaziwa kakhulu kwi-Intanethi ngezizathu ezininzi. I-ILGM ibonelela ngenkonzo yabathengi engakholelekiyo, iintlobo ngeentlobo zembewu onokukhetha kuzo, ukuthengisa okugqwesileyo kunye nezaphulelo, kunye nengqokelela ebanzi yezixhobo ezikhula simahla somlimi omtsha kraca noyingcali kwi-intanethi.
I-ILGM isekwe eNetherlands kwaye iqhutywa nguRobert Bergman, umlimi onobuchule obumangalisayo otya intsangu nothe wakhula intsangu iminyaka elishumi. Banikezela ngamaxabiso aphantsi, imbewu yodidi oluphezulu kakhulu ekumgangatho ophezulu, kwaye bahambisa kumazwe amaninzi ahlukeneyo. Le bhanki yembewu ekumgangatho ophezulu ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zembewu yentsangu. Nokuba ungathanda ntoni, uya kufumana into oya kuyithanda kule ndawo esemgangathweni yokuthenga imbewu yentsangu.
Ukuba ufuna inqanawa ye-cannabis ithunyelwe e-USA, le nkampani yindlela eya kuyo, enika iitoni zembewu yentsangu kwaye inike neentengiso zokufumana into oyithandayo. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungazama ntoni, umfuyi unendlela ezahlukeneyo zokuqala kunye neepakethe zokuxabisa. Ngale ndlela ungazizama ngobungakanani ukuze ubone ukuba uthanda ntoni.
Inkampani yamkela iindlela ezahlukeneyo zokukhetha amaxabiso, kubandakanya ukusebenzisa i-bitcoin, ikhadi lamatyala, ugqithiselo lwebhanki, okanye imali njengentlawulo. Imbewu ihanjiswa simahla kwaye zonke iimveliso zembewu ziza nesiqinisekiso sokuhluma. Ukuba imbewu yakho iyasilela ukuntshula, siya kuyithumela enye simahla. Ngaphezulu kwe-100 yeendidi ezahlukeneyo ziyafumaneka kwaye iwebhusayithi kufanelekile ukuba undwendwele.
Ukukhula okubanzi kunye nesiseko solwazi lwezityalo
Umgangatho ophezulu we-CBD kwizigulana ezinamayeza
Isiqinisekiso sokuhluma se-80%
Ukuhanjiswa kwehlabathi kubandakanya iUSA kunye neCanada
Iindlela ezininzi zokuhlawula
Ayibonisi ukuhanjiswa simahla
Ukukhethwa kwesitokhwe esiqingqiweyoubunzima xa kuthelekiswa nezinye iibhanki zembewu
Inkxaso yabathengi abahluphekileyo
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto ibalulekileyo kwimbewu yeKing Crop
Crop King Seeds yenye yezona ndawo zigcina imbewu eMantla Melika, ebibonelela ngembewu ebabazekayo phantse iminyaka eli-15 ebekwe eVancouver, Canada. Yasekwa ngonyaka ka-2005, Imbewu yeKing King iye yafezekisa imfuza yesityalo se-cannabis kubavelisi bezonyango nakwimizi-mveliso abafuna eyona nto iphambili kumanqanaba eTHC kunye nobungakanani besityalo.
Le nkampani iqala kancinci ukwenza uphawu lwayo- kunye nokwakha igama layo- njengeyona nto iphambili yokuthumela ebhankini kwimbewu eUnited States. Imbewu yabo igqibelele ukuba ngabaqalayo kunye nabalimi abaphambili abafuna isivuno esihle. Inkampani ikuvumela ukuba ukhethe amacebo okucoca ezahlukeneyo ukuze ufumane iindidi ezifanelekileyo kwiimfuno zakho kwaye ikwabonelela ngecandelo lewebhu elikuxelela konke malunga nendlela oyityala ngayo imbewu yakho entsha.
Inkampani ayinayo umgaqo-nkqubo wokuhambisa simahla, eyona ndlela inexabiso eliphantsi lokukhetha ukuhambisa ijikeleze iidola ezilishumi Nangona kunjalo, kukho iindidi ezingama-31 ezizodwa onokukhetha kuzo, zonke zinamazinga amahle okuhluma angama-80% okanye nangaphezulu. Ukuba imbewu yakho iyasilela ukuhluma, inkampani iyakuthumela kwakhona imbewu entsha.
Banikezela ngembewu ye-cannabis eMelika nakwihlabathi liphela. Zonke iiodolo zehlabathi ziqinisekisiwe ukuba ziya kusiwa, kwaye ukuba akunjalo, ziphinde zizithumele ngokwakho, nkqu nokongeza izinto ezingahleliwe ezinje ngeepeni kunye neetotshi kwiiodolo zabo ukuzigcina zilumkile kwaye zilula. Ungabahlawula ngeBitcoin, iVisa yeKhadi letyala, okanye Mastercard.
Iipakethe zexabiso eliphantsi ziyafumaneka eziza kukunceda ugcine imali
Eyona ilungele abathengi bezorhwebo
Iintlobo ze-cannabis ezikumgangatho ophezulu
Inikeza ukuthunyelwa ngenqanawa
Iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula ziyafumaneka
Akukho ukuhanjiswa simahla ngaphandle kokuba kuthengwe ngobuninzi
Umndilili wenkonzo yabathengi
Cofa apha ukuze ufumane ezona zithembiso zibalaseleyo kwiBhanki yeMbewu yeMSNL
I-MSNL yeBhanki yeMbewu ibalasele phakathi kwezinye iibhanki zembewu ezikwi-Intanethi ezithunyelwa kwingingqi yaseMelika. Inkampani esekwe eNetherlands ebiseshishini ukusukela ngo-1999. Inkampani inikezela ngembewu ekumgangatho ophezulu ethandwa ngabantu be-cannabis kunye namaxabiso. Kwakhona, zezona ZIBALULEKILEYO ZEMBEWU YOKUFUNDA KWI-intanethi ngeqonga elikwi-intanethi elakhiwe ngokufanelekileyo, iqulethe lonke ulwazi olubalulekileyo, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Kwinkampani, iingcali ziphuhlisa imbewu ye-marijuana ukufumana ipesenti yokuhluma ephezulu kune-90%, kwaye baya kuvavanyo olupheleleyo ngovavanyo lwencwadi, kunye nezinto zolawulo lomgangatho.
Uninzi lweephakeji lubonelela ngokukhawulezisa ngokukhawulezileyo kwaye luthathe ixesha elingaphantsi kweeveki ezintathu ukuba lihanjiswe. Imbewu yeMSNL ifumene itoni yamabhaso ngenxa yemfuza yentsangu. Banikezela ngeembewu ezigqwesileyo eziqinisekisiweyo ukuba ziinotshi eziphezulu. Imbewu iphathwa kwaye iphuhliswe ziingcali zodidi lokuqala kwinkampani yazo. Ke akufuneki ukuba ukhathazeke ngembewu eyonakalisiweyo okanye ezinye iingxaki. Umhloli oqeqeshiweyo ukhangela zonke iimbewu eziqhelekileyo ngesandla ngaphambi kokuba azithumele kuwe.
Iphakheji inemveliso engacwangciswanga apho imbewu ibekwe khona. Inkampani izinikele ekuqinisekiseni ukuba ufumana imbewu ngazo zonke iindlela. Ngokuthenga konke, uqinisekisa ukuba ufumana imbewu yasimahla. Umzekelo olungileyo ngowuphi na oyalela kuwe rhoqo kwaye ufumana imbewu ezi-5 zasimahla. Kukho iiphakheji zevenkile efumanekayo eziqulathe kabini isixa sembewu esongeziweyo kwaye zilungile kubathengi bezentengiso.
Ukhetho olubanzi lweentlobo
Ireyithwe kakhulu, kunye novavanyo lweentlobo ezithile
Ukuhamba ngokulula kwiwebhusayithi
Inkqubo yokunyaniseka kunye nokwenyusa okuhle
Isiqinisekiso sokuhluma esilinganiselweyo
Imbewu ebiza kakhulu
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto intle kwiSeedsman
I-Seedsman, ibhanki yembewu esekwe e-UK, yamkelwe njengeyona bhanki yembewu ithenjiweyo neyasekwa ngo-2003. Ukusukela ngoko waba ngumnikezeli owaziwayo kwimarike yembewu ekumgangatho ophezulu. Ezi zezinye zeembewu ezilungileyo kwiibhanki ze-intanethi ezihambisa imbewu eUnited States.
Into elungileyo ngabo kukuba baneqela elingaphezulu kwe-3,000 yeembewu ze-cannabis. Inkampani iqokelela kwiibhanki zesidoda ezingama-65 kwihlabathi liphela. Ke xa uthenga kwaSeedsman ngekhe uthenge kuphela iimbewu zabo kodwa uthenge ezo ezivela kubalimi abohlukeneyo.
U-Seedsman ubonelela ngoluhlu lweyona mbewu ifikelelekayo kodwa okwangoku uyakwazi ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu. Uqinisekile ukufumana into ekufaneleyo, imbewu eyiyo ye-cannabis ngokwakho.
Unokuthenga nembewu yonyango ebonelela ngokunyanga kwiintlungu ezahlukeneyo kunye neentlungu. Olunye lwezi zinto kukudakumba, ukudumba, ixhala, ukuphuthelwa kunye nokunye okuninzi jonga iphepha labo lembewu ukuze ubone ezinye iinkcukacha ngazo.
Inkampani ikwabonelela abathengi ngenketho yokuhambisa eqinisekisiweyo apho uqinisekisiweyo ukuhanjiswa kwembewu nokuba yeyiphi na. Kwakhona, nikezela ngezaphulelo rhoqo kwaye bade babonelele ngamanqaku okunyaniseka ukuze ugcine imali kuhambo lwakho lokuthenga olulandelayo.
20% Isaphulelo seNtlawulo seBitcoin
Iipesenti ezingama-80 zokuhluma
Inkonzo elungileyo kubathengi
Inye kuphela indlela onokukhetha ngayo kwi-10 yeedolaukuthunyelwa rhoqo
Inani elincinci loku-odola le- $ 70
Iwebhusayithi incinci kancinci kunabanye
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto ibalulekileyo kwiMbewu yeQuabec Cannabis
IBhanki yeMbewu yeQuannec Cannabis yenye yezona mveliso zinkulu kunye nabathwali beentlobo zentsangu. Imbewu yeQuannec Cannabis yasekwa ngonyaka we-2012 kwaye isebenza ngaphandle kweMontreal. Le bhanki yembewu yaseCanada iphethe kuphela ezona ntlobo zintle kwaye ikwabonelela ngeenkonzo ezinkulu zabathengi.
Hayi iMbewu ye-Cannabis yaseQuebec ineentlobo ezingama-50 kuphela zeembewu ze-marijuana, kodwa unokufumana iintlobo ezingama-50 ezizodwa zembewu enkulu ye-cannabis ehlabathini, kubandakanywa iintyatyambo ezizenzekelayo, eziqhelekileyo kunye nezobufazi.
Ibhanki yembewu sele isebenza ngaphezulu kweminyaka eli-15 kwaye ijolise ikakhulu kumgangatho wentsangu abayinikelayo. Xa ujonge i-cannabis yolonwabo okanye yamayeza, unokuqiniseka ukuba uneempawu ezisemgangathweni kunye nezixa ezichaziweyo ze-CBD kunye ne-THC.
Ezinye zeemveliso ezithengisa kakhulu kwimveliso yazo nguJack Herer obhinqileyo, igolide yaseQuebec 2.zero yobufazi, i-AK47, kunye nembewu yegolide emnyama yentsangu yegolide. Nangona ibhanki yembewu ikho eCanada, ihambisa imbewu yokhula kwihlabathi liphela ngenkonzo ekhawulezileyo nekhuselekileyo.
Ungayithenga imbewu yentsangu kwi-Intanethi ngaphandle kokukhathazeka malunga nenkqubo yabo yokukhohlisa. Baza kuyifihla ngobuqhetseba imbewu kwizinto ezinje ngeeCD eziqhelekileyo, amakhadi okuzalwa, nezinto ezinjalo. Iya kulandelwa kunye neodolo yakho ukuze wazi ngokuthe ngqo ukuba iza kufika nini nayo. Uya kuba namava okumgangatho ophezulu wokulungiselela kunye nokusetyenziswa kwamayeza.
Ukhetho olwahlukileyo lweendlela zokuhlawula
Iinkonzo zabathengi ezigqwesileyo
Ukuhanjiswa kwehlabathi lonke
Akukho siqinisekiso sokuhluma
Akukho nkqubo yokunyaniseka
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto ibalulekileyo kwiMbewu yeGorilla
Le bhanki yembewu ikwi-UK kwaye izenzele igama kwimarike yentsangu ngexesha elifutshane kakhulu. Ibhanki yeGorilla Seed yasekwa ngo-2011 kwaye abanini benkampani bafaka amava abo e-cannabis, awongeza ngaphezulu kweminyaka engama-40 yokusebenzela uluntu.
IGorilla Seed Bank inikezela ngeentlobo ngeentlobo zeentlobo zezona zidumileyo kwihlabathi liphela nakubalimi abakhethekileyo, inemigca yentsangu engaphezu kwama-2500 evela kubalimi bembewu abangaphezu kwama-60. Okwangoku inkampani ayizikhuli iintlobo zayo kwaye ithengisa imbewu evela kwiinkampani ezibandakanya iBarney's Farm, iGreenhouse Seeds, imbewu yeBhombu, iDinaFem, iNdumiso, kunye neBig Buddha.
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zembewu, ezinje ngembewu ezityatyamba, imbewu yabasetyhini, kunye neentlobo zonyango. Iinanapple Chunk, iCop Crop, i-AK49, i-Super Cheese, i-OG Kush, kunye noMhlolokazi zizinto zabo ezithengisa kakhulu intsangu.
Iindleko zembewu yeGorilla zibalasele, ngaphandle kokuthathela ingqalelo imbewu yasimahla oyifumanayo njengenxalenye yeodolo nganye kunye nokuhanjiswa simahla abakunikayo. Bathengisa umgangatho ophezulu kunye neyona mbewu ithandwayo ngeendleko ezifikelela kuma-30% ezantsi kunaleyo yabalimi bokwenene. Bhatale nge-bitcoin, idebhithi okanye ikhredithi, imali okanye ukuhanjiswa ngocingo, kwaye uya kuba ukulungele ukuba nembewu yakho yentsangu kanye ekhaya.
Ukuthumela ngokukhawuleza kwi-US
Inketho yokutsiba iyafumaneka
Ukhetho olwahlukeneyo lwendlela yokuhlawula
Unike ngePhakheji yokuqonda
Akukho ntlawulo zemali
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto intle kwiiMbewu zeHerbies
Yasekwa kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, iHerbies Seeds izinikele ekunikezeleni abathengi ngembewu ephezulu ye-hashish yexesha elide kuneyona nkampani iphezulu.
Iiherbies ziqinisekisa ukufundeka kwenqanaba lokuqala ngokubonelela ngenkcazo yemveliso ethile kunye nazo zonke iirekhodi ozifunayo malunga nembewu yakho yokhula. Imbewu yeHerbies iyazingca kukhetho lwembewu ye-cannabis kwi-intanethi. Imbewu yeherbies ivela ubuncinci iipesenti ezingama-70 eziqulathwe ukuba zihlume kakuhle kwaye zenze imveliso elungileyo.
Le nkampani yembewu ye-cannabis ineentlobo ze-marijuana ezingaphezu kwe-2 000 onokukhetha kuzo, nganye ineentlobo ezithile zentsangu. Iimbewu zeHerbies zibonelela ngembewu yabasetyhini, iintyatyambo ezizenzekelayo, i-THC ephezulu, kwanobunzima babaqalayo. Ngamafutshane, nokuba ukhangela ntoni, ukhetho oluhle kakhulu lweeHerbies luya kukunceda ufumane iimbewu ezisemgangathweni ezikuthandayo. Ungayithenga imbewu oyikhethileyo ngendlela oziva ukhululeke ngayo kunye nokudlulisa.
Iimbewu zeHerbies zibonelela ngeenkonzo zokuhambisa ezithunyelwa kwihlabathi liphela. Ukuhambisa ngenqanawa e-USA kuya kuthatha malunga neentsuku ezi-5-8. Zonke iiodolo ziza nembewu yasimahla ye-cannabis. Imbewu ifihliwe kwimveliso. Khetha ukhetho lokuthumela ngenqanawa ukuze ufumane ukhuseleko oluphezulu. Kwiingxowa zobuqhetseba, imbewu iyasuswa kwisingxobo sayo santlandlolo kwaye ibekwe kungabikho nto kwiingxowa ezikhethekileyo zeZiplock, ezifihlwe njengokuthenga okuqhelekileyo okuya kukunceda uphephe ingqalelo engafunekiyo.
Ukongeza kukhetho lokungaziwa, iibhili ezingaziwa ngeBitcoin zinceda ekuqinisekiseni ukuthengwa okukhuselekileyo, okungabalulekanga. Imbewu yeHerbies iyazingca ngokuthembeka kunye nenkonzo ekhawulezileyo. Hayi, nokuba uphi na jikelele, uHerbie uqinisekisa ukuba uya kuyifumana imbewu yakho kwisithuba esingaphantsi kweeveki. Ndwendwela iqela lenkonzo yabathengi bakaHerbies ngoncedo.
Igcina imbewu evela kwiibhanki zembewu ezaziwayo
Udidi olukhulu lweiintlobo
Imivuzo emikhulu kunye nezaphulelo
Ukuhanjiswa kwesiqinisekiso kubonelela ngembewu yasimahla
Inkcazo yebhlog echazayo
Intlawulo eyahlukileyo yokuhanjiswa okuqinisekisiweyo kunye nokuhanjiswa okungafunekiyo
Inkonzo yabaThengi engalunganga
Izinketho zentlawulo encinci
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto intle kwiMbewu ePhakamileyo
Imbewu ePhakamileyo inikezela yonke imbewu yentsangu kubafuyi abaninzi abaziwayo kwihlabathi liphela, banikezela ngembewu yabo ngamaxabiso asezantsi kakhulu kunye namaxabiso asengqiqweni. Le bhanki yembewu ithunyelwa eUnited States intsha, isungulwe ngo-2013 eNgilane kwaye sele inike umhlaba eyona mbewu yokuqala yentsangu kwishishini.
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngeeMbewu zeMbewu eziPhezulu zeMbewu kukuba banenkqubo elungileyo yokunyaniseka. Ukuba uthenga kwiwebhusayithi yabo, uya kufumana i-kush kushpopoints zasimahla. La manqaku emali ye-kush angasetyenziswa njengemali yokwenene yokuthenga uninzi lwezinto zawo. Zinexabiso elipheleleyo le-4000 + enye yohlobo lwengqokelela eqokelelwe ngaphezulu kwabafuyi be-100 kwihlabathi liphela. Ke unezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Xa u-odola, baya kuyigubungela imbewu yakho yentsangu ngaphakathi kwezinto ezinje ngeepeni, izikipa, iithoyi, njl.njl.Ukuba ungumyalelo ovela eUnited States, kuyakuthatha phakathi kweentsuku ezili-15 ukuya kwezingama-30 ukuba imbewu ifike kuwe. Kuya kufuneka uhlawule i-15 yeedola ukuhambisa. Ukuba iodolo ayifikeleli kuwe, baya kukuvuyela ukuthumela omnye umntu. Enye yeentlobo zentsangu abazikhuthazayo yiSomango, uMhlolokazi oMhlophe, iSticky Zkittle Glue, iGlue yeGlue, kunye neHaz Purple.
Imbewu yeMarijuana yaseAmsterdam AMS
Iintlobo ezinkulu zeemveliso ezikumgangatho ophezulu
Iqela elihle lenkonzo yabathengi
Uninzi lweendlela zokuhlawula
Ayiboneleli naziphi na iikhowudi zesaphulelo
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto ibalulekileyo kwiMbewu yeMarijuana AMS
I-AMS Seed Bank yinkampani esekwe eAmsterdam esekwe kwi2002. Enye yeebhanki zembewu ezigqwesileyo ezithumela imbewu esemgangathweni ye-cannabis kwihlabathi liphela. Baqokelele amava amaninzi ekuntshuleni nasekucinezelweni kwemfuza; unokufumana iintlobo ezininzi ezizodwa zeempawu kwiwebhusayithi yabo.
Ziingcali zoxinzelelo kwaye zizisa kuphela iintlobo ezikhethwe ngesandla. Banyusa kuphela ezona ntlobo zibalaseleyo, zikhokelela kwizintlu ezimbalwa zeendlela ezikhoyo kwiwebhusayithi yabo. I-AMS ithengisa malunga ne-135 + yeentlobo ezithile ze-cannabis. Nangona benenani elincinci lezifo, ezifumanekayo zezona zilungileyo.
Njengazo zonke iibhanki zembewu ezikwi-intanethi ezisemgangathweni ezithunyelwa e-USA, le bhanki yembewu ye-AMS ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula ezinje ngokudluliselwa kwebhanki, imali, ikhredithi kunye namakhadi etyala, umanyano lwentshona, i-bitcoin, njl.
Banokuhanjiswa simahla kwihlabathi liphela okukhoyo kunye nokuqonda. Ngapha koko, baya kuhlala bekubonelela ngembewu yasimahla xa kunokwenzeka uthenge ngaphezulu kwembewu ye-10 kubo, kwaye banesikhokelo esineenkcukacha sokukhulisa esifumanekayo nakowuphi na umntu omtsha wokulima intsangu eyedwa kunye nesiqinisekiso. Ukuhanjiswa kweentsuku ezingama-21 okanye baya kuyithumela kwakhona imbewu simahla.
Imbewu yesimo sengqondo
Inkampani yeBrand ethembekileyo
Uluhlu olubanzi lokukhetha ubunzima
Uninzi lwezaphulelo kunye nokunyusa
Cofa apha ukuze ufumane eyona nto ibalulekileyo kwiMbewu yeSimo
Isimo seBhanki yeMbewu ngumthengisi osekwe e-UK osasaza imbewu ye-cannabis kunye neempahla. Ngokwewebhusayithi yayo, yeyona bhanki yembewu inkulu ehlabathini. Zingaphezulu kwamakhulu amabini iimveliso zentsangu kwiimarike kwiiwebhusayithi zazo. Nantoni na oyithandayo, siqinisekile ukuba uya kuyifumana kwiwebhusayithi yabo.
Uku-odola eMelika kuya kuthatha iveki enye ukuya kwezintathu kwaye bayakuvumela ukuba ukhethe imbewu nganye yeentlobo ezahlukeneyo kwaye uzi-odole ngaloo ndlela. Kwi-odolo enye, unokuba nembewu nganye nganye yeemveliso ezahlukeneyo kunye neentlobo njengoko ufuna.
Baneempawu ezikhethekileyo ze-cannabis eziyi-9 ezithengisa izinto ezifana neengxowa kunye nezinye iimpahla ezinxulumene ne-cannabis. Ungahlawula ngemali, ikhadi lebhanki, ikhadi letyala, iodolo yemali, okanye amakhadi eVisa ahlawulwa kwangaphambili. Banendlela yokuhambisa eyahlukileyo enobulumko kwaye iyabiwa. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeephakeji zobuqili ezinikezelwayo.
Ngaba kusemthethweni ukuthenga imbewu ye-cannabis?
Kukho izinto ezithile ezingafaniyo nokuba semthethweni kwembewu ye-cannabis eMelika. Ngokukodwa, unokuthenga ngokusemthethweni okanye ube nembewu oyisebenzisayo njengesithiyelo sentlanzi okanye intaka yentaka. I-caatat apha kukuba imbewu ehambelana nale nkcazo ngokubanzi ihlala iyimbewu ye-hemp yentengiso eneepesenti ezisezantsi ze-THC. Ngamanye amagama, awungekhe usebenzise imbewu ukukhulisa izityalo eziza kukunika indawo ephezulu enxulumene ne-cannabis.
Ukutolikwa kwezikhokelo zomthetho nako kutshintshile kule minyaka idlulileyo. Tolika izikhokelo zomthetho ukubonisa ukuba imbewu ye-cannabis isemthethweni, ngaphandle kokuba ayihluma. Oku kungabikho kokuhluma kubalulekile.
Ukuqhubekeka nokwenza nzima umbuzo wonke ngokusesikweni kwembewu ye-cannabis, amanye amazwe akuvumela ukuba ube nembewu ngokusemthethweni kodwa ungakhuli. Angaphantsi kuphela kwama-20 amazwe akuvumela ukuba ukhule izityalo ze-cannabis ngokusemthethweni, ke nokuba unganakho ngokusemthethweni ukuba nembewu kwamanye amazwe, awunakwenza nto ngazo.
Ungazi njani iMbewu yakho yeCannabis iyinyani
Njengaso nasiphi na isivuno, isivuno esiphumeleleyo se-cannabis siqala ngembewu esemgangathweni, kodwa nakubalimi bexesha elide, kunokuba nzima ukukhetha ezona zilungileyo. Ukukunika umbono wento ekufuneka ujonge kuyo xa ulungiselela imbewu yakho yegadi yakho yentsangu, apha sithetha malunga nokukwazi ukubona imbewu ekumgangatho ophezulu yentsangu ngokubona.
Inkangeleko kunye noMbala: Imbewu esebenzayo inombala omdaka, omdaka, okanye omnyama, imbewu yazo engakhulanga yimibala ekhanyayo emhlophe, emthubi kunye nokukhanya okuluhlaza.
Ubungakanani kunye nobume: Ujikeleze okanye iinyembezi zihamba phambili.
Ukuqina kunye nokuqina: amaqokobhe angaphandle agudileyo kunye nomphezulu ongagqabhukiyo
Ubudala: Gcina imbewu kwindawo epholileyo, emnyama (nakwifriji) ukuyigcina ingaboli okanye ifumane ukungunda.
Uvavanyo lokudada: Amanzi afunxiweyo anele ukubona ukuba inenqwaba eyaneleyo yokuntywila kwiyure okanye ezimbini, kwaye ukuba iyenzeka, inethuba elingcono lokuhluma kuneMbewu edadayo.
Iinketho zeNtlawulo yeBhanki yeMbewu
Iintlawulo kwi-intanethi ziqhelekile kwezi ntsuku. Abantu bahlawula phantse yonke into ngokusebenzisa iinkqubo zokuhlawula kwi-Intanethi. Yiyo loo nto nembewu yentsangu ingekho njalo.
Iibhanki zembewu zineendlela ezahlukeneyo zokuhlawulela iodolo yakho. Iindlela ezahlukeneyo ziyafumaneka apha:
Ukutshintshwa kweBhanki kwi-Intanethi
Intlawulo ngemali ezinkozo
Iibhanki zembewu ezamkela iVisa
Ikhadi ledebhithi okanye ikhadi lamatyala
Nokuba ufuna ukuphucula ufuzo lwento osele uyikhula okanye unethemba lokukhula kweyona mbewu intle kakhulu ye-cannabis, kubalulekile ukuba wazi apho ungaqala khona. Uninzi lweebhanki zembewu ye-cannabis ezikwi-intanethi zinokukuphoxa, kodwa hayi ezikuluhlu. Iibhanki zembewu ephezulu ye-2020 inokugubungela phantse nawuphi na umlimi namhlanje.
Nangona sizithanda zonke iibhanki zembewu ezikumgangatho ophezulu ezidweliswe kwi-Intanethi ezithunyelwa e-US, sihlala sithembele ngakumbi kwi-I Love Growing Marijuana, kuba baneentlobo ngeentlobo zoxinzelelo oluphezulu kakhulu kwaye sivile zonke izinto ezilungileyo malunga nabo kuyo yonke indawo. Banikezela ngolwazi oluninzi kubavelisi bentsangu kwiwebhusayithi yabo.
Qinisekisa ukuba uthenga imbewu kwibhanki yembewu esemthethweni. Oku kuya kunceda ukunciphisa naluphi na uloyiko onokuba nalo kwaye ayizukukwenza ukuba inkqubo yokuthenga ibe noxinzelelo kuphela kodwa iya kuyenza ibe mnandi ngokupheleleyo.
Ngokubanzi, zonke iibhanki zembewu ezikwi-Intanethi ukusuka kumgangatho odwelisa ukusiwa e-United States kwesi sithuba, kwaye zonke zilungile kumgangatho wembewu kunye nempumelelo yokuhluma. Ukuba uyazithanda ezinye iibhanki zembewu ezimbalwa ezivela kolu luhlu, ungaxhalabi kwaye u-odole imbewu namhlanje.
Q: Ngaba zikhona iibhanki zembewu eUnited States?
A: Kwiindawo zaseMelika, kukho intengiso enkulu ye-cannabis, kwaye abalimi baseMelika bakhula iintlobo ze-cannabis ezaziwa kwihlabathi liphela. Umcimbi unento yokwenza norhulumente waseburhulumenteni wase-US kunye nenqanaba elisemthethweni le-cannabis. Intsangu kunye neziphumo zayo (kubandakanya imbewu) zibalwa njengeShedyuli 1 ichiza elinokusetyenziswa okuncinci okanye okungasetyenziswanga ngokusemthethweni, okwenza kube nzima, okanye kungenzeki, ukuba ibhanki yembewu isebenze eUnited States, njengoko isenza eUnited States, I-Netherlands, iSpain okanye iCanada (enezinto ezisemthethweni ezisemthethweni okanye ngokusemthethweni).
Q: Yeyiphi ibhanki yembewu eneyona genetics ilungileyo?
A: Xa kufikwa ekuthengeni imbewu ye-cannabis, ukuqinisekisa ukuba ufumana olona fuzo lubalulekileyo ukuba ufuna ukufumana okuninzi kwisityalo sakho. Indlela entle yokuqinisekisa ngale nto kukujonga igama lebhanki yembewu othenga kuyo kuba xa kukho nantoni na ebonisa umgangatho, iyakubanelisa abathengi. Ngale nto engqondweni, sidibanise uluhlu lweebhanki zembewu ezithengisa kakhulu apha ezikhethwe ngabalimi babalimi.
I-Poll eNtsha eNew Hampshire: I-Kasich Surges Ngelixa uChristie Esokola
Ngaba uHillary Clinton uxhalabile malunga nePennsylvania?
'Uzalelwe inkwenkwezi' Uya kungenisa iingoma ezintathu zoqobo kwii-Oscars zokuqwalaselwa-ngubani oza kuphumelela?
IWarnerMedia Ingakhuphisana neDisney-Nantsi indlela
amadoda athandana namanye kwindawo yam
yeyiphi engcono iklabhu yokucheba kaharry okanye yedola
leliphi ijelo eli-rick kunye nodaka kulo
Uqoqosho lwethu xa kuthelekiswa namanye amazwe
Ungayithumela njani ifeksi kwi-gmail
iselfowuni yokujonga kwakhona simahla